रोमी 10रोमी 12
रोमी 11 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
11 तब मैले सोधें, “के परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई फालिदिनु भयो त?” त्यसो होइन! म स्वयं एक इस्राएली हुँ। म अब्राहामको परिवारको हुँ। म बिन्यामीनको कुलको हुँ।2तिनीहरू जन्मनु भन्दा पहिलेनै परमेश्वरले इस्राएलहरूलाई आफ्नो मानिसको रूपमा चुन्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई निकालेर फ्याँकनु भएन। निःसन्देह, तिमीहरू जान्दछौ धर्मशास्त्रले एलियाको बारेमा कथा भन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ, एलियाले परमेश्वरलाई इस्राएलका मानिसहरूको विरुद्धमा यसप्रकारले प्रार्थना गरिरहेका थिए,3“परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईंका अगमवक्ताहरूलाई मारे। अनि तपाईंका वेदीहरू सबै भत्काई दिए। म मात्र एकजना अगमवक्ता अझ बाँचिरहेछु। अनि मानिसहरू मलाई मार्न खोजिरहेछन्।” [a]4तर परमेश्वरले एलियालाई कस्तो उत्तर दिनुभयो? उहाँले भनन्नुभयो, “मैले अझ सम्म मलाई पुज्न सात हजार मानिसहरू राखेकोछु। ती सात हजार मानिसहरूले बाललाई पुजेनन्।” [b]
“परमेश्वरले मानिसहरूका इन्द्रियलाई चेतनाहीन बनाइदिनु भयो।”
अझसम्म त्यही भइरहेछ।”
अनि ती सदा कष्टमा परिरहुन्।”
जब तिनीहरूका पापहरू म हरण गर्नेछु।”
उहाँलाई सल्लाह कसले दिनसक्छ?”
ता कि बद्लिमा परमेश्वरले पनि उसलाई उपहार दिनु परोस्।”
रोमी 11:3 1 राजा 19:10, 14 बाट उद्धृत गरिएको।
रोमी 11:4 1 राजा 19:18 बाट उद्धृत गरिएको।
रोमी 11:8 : यशैया 29:10
रोमी 11:8 : व्यवस्था 29:4
रोमी 11:10 : भजनसंग्रह 69:22-23
रोमी 11:27 : यशैया 59:20-21, 27:9
रोमी 11:34 : यशैया 40:13
रोमी 11:35 : अय्यूब 41:11